ယနေ့နီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူပုံမှန်ကြော်ငြာခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS-မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ - အိုင်ဖုန်း obsessive ခေါ်ဆိုသူ၏ပိတ်ဆို့ရန်လုံလောက်သော။ အဆိုပါအမည်ပျက်စာရင်းကအောင်အသုံးပြုပုံလုပ်နိုင်တစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသူတစ်ဦးအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အနက်ရောင်စာရင်းတစ်ခုစာရင်းပေးသွင်းထားသူပေါင်းထည့်ခြင်း။ အိုင်ဖုန်းတွင်ကနည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခု၌ပြစ်မှားမိသည်။
က "ကိုရှာပါက iPhone » disable လုပ်နည်း
"iPhone ကိုရှာပါ" - သင်သည်ပိုင်ရှင်များ၏ပညာအတတ်မရှိဘဲ data တွေကိုပြန်ညှိမှုတားဆီး, အရှုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူ၏အမှု၌ gadget ကခြေရာခံဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းအလေးအနက်ကာကွယ်မှုအင်္ဂါရပ်။ ဖုန်းကိုရောင်းရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ဥပမာ, ဒီ function ကိုသစ်ကိုပိုင်ရှင်ကစတင်သုံးစွဲနိုင်အောင်, ကို turn off ဖို့လုံးဝလိုအပ်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆန်းစစ်ကြပါစို့။
IPhone ကိုမှ iPhone မှဂီတကိုလွှဲပြောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
IPhone ကိုအသုံးပြုသူအများစုမှာထိုသို့သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးပုဒ်ကစားရန်ခွင့်ပြု, ကစားသမားများအတွက်အပြည့်အဝအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောလျှင်, ဂီတအောက်ပါနည်းလမ်းများကိုနောက်ထပ် iPhone ကိုတဦးတည်းမှတဦးတည်းအနေဖြင့်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ က iOS ကိုအတွက်အသုံးပြုသူမှမရရှိနိုင်ကြောင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ဒါကြောင့် iPhone ကတစ်ဦးစုဆောင်းမှုမှ iPhone ကနေဂီတလွှဲပြောင်းအခြားအပေါ် Apple ကတဦးတည်းစမတ်ဖုန်းကနေသီချင်းတွေကိုလွှဲပြောင်းဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာမရှိကြပေ။
IPhone အတွက် WhatsApp ကို
ယနေ့များသောအားဖြင့်အတော်လေးယုတ္တိဖြစ်သောအနည်းဆုံး instant messenger, set အသုံးပြုသူများသည်စမတ်ဖုန်း - ကအလေးအနက်ပိုက်ဆံငွေစုနှင့်အတူမိသားစု, မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဤသံတမန်တို့အထင်ရှားဆုံးကိုယ်စားလှယ်တဦးတည်းက iPhone အတွက်သီးခြားလျှောက်လွှာရှိပြီးအရာ WhatsApp ကိုဖြစ်ပါတယ်။
IPhone ကို၏တာတော့သေချာတယ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ device အတွက်နီးပါးမည်သည့်အခွအေနေရောင်းဖို့လွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးကစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ iPhone ကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပါ, သင်သည်သင်၏ iPhone ကိုယူမင်္ဂလာရှိ၏သူတစ်ဦးအလားအလာပိုင်ရှင်အသစ်တွေ့ပြီ။ ဒါပေမယ့်မှားယွင်းတဲ့လက်သို့ရှောက်သွားမရှိစေရေးအတွက်စမတ်ဖုန်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအပြင်, သငျသညျအခြို့သောပဏာမအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါသင့်တယ်။
ယနေ့ Apple ကသူ့ဟာသူ iPod ကိုရန်မလိုပါကြောင်းဝန်ခံ - တကယ်တော့အဲဒီမှာက iPhone သောအမှန်တကယ်, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အသုံးပြုသူများကဂီတကိုနားထောင်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့။ လက်ရှိတေးဂီတစုစည်းမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖုန်းပေါ်မှာ loaded လြှငျ, မရှိတော့, ကဖယ်ရှားပစ်ရန်အစဉ်အမြဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမြဲ iPhone ကိုအမျှထံမှဂီတ Remove Apple က iPhone ကိုကဲ့သို့မိမိကိုမိမိအားဖြင့်သီချင်းတွေကိုဖျက်ပစ်နိုင်စွမ်းပေးအပ်နှင့် installed iTunes ကိုအတူကွန်ပျူတာသုံးပြီးသိရသည်။
IPhone အတွက် Snapchat သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Snapchat - လူမှုရေးကွန်ယက်ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းပေါ်ပြူလာလျှောက်လွှာ။ ဖန်တီးမှုဓာတ်ပုံများဘို့မျက်နှာဖုံးများများစွာသောအမျိုးမျိုး - သူကျော်ကြားဖြစ်လာသည်ကျေးဇူးတင်စကားအရာမှန်ဆောင်မှု၏အဓိကအင်္ဂါရပ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone ပေါ်မှာ Snapchatom သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်။ အောက်တွင် Snapchat အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်ကျနော်တို့ Snapchat ၏အခြေခံတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကို iOS ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုအသုံးပြုဖို့စဉ်းစားပါ။
IPhone ကိုမှ iPhone မှ SMS ကို-မက်ဆေ့ခ်ျလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
ဒါကြောင့်အရေးကြီးသောဒေတာများပါဝင်နိုင်သည်အဖြစ်အတော်များများအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ iPhone ကို SMS ကို-စာပေးစာယူသိုလှောင်, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအဖြစ်အခြားအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ပါဝင်သည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ကို iPhone ကနေ iPhone ကိုမှ SMS ကို-မက်ဆေ့ခ်ျလွှဲပြောင်းနိုင်ပုံကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ စံနည်းလမ်းနှင့်အချက်အလက် backup လုပ်ထားဘို့အထူးဆော့ဗ်ဝဲ၏အကူအညီနှင့်အတူ - ဒီနေရာမှာ iPhone မှ iPhone ကိုမှနျကို SMS-မက်ဆေ့ခ်ျလွှဲပြောင်းကျနော်တို့မက်ဆေ့ခ်ျလွှဲပြောင်းရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုမှာကြည့်ပါ။
IPhone အတွက် Apple ကပိုက်ဆံအိတ်သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
App ကို Apple ကပိုက်ဆံအိတ် - ပုံမှန်အတိုင်းပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုအီလက်ထရောနစ်အစားထိုး။ အထဲတွင်သင်ကစျေးဆိုင်ထဲမှာငွေသားမှတ်ပုံတင်မှာပေးဆောင်ရသောအခါသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အခြိနျမရှေးအဖြစ်ကောင်းစွာအတိုင်း, သင်တို့၏ဘဏ်ကတ်များနှင့် codes တွေကိုသိမ်းထားနိုင်တယ်။ ဒီနေ့ဤလျှောက်လွှာကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်မှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။ အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် NFC ကိုရသောသူသည်အသုံးပြုသူများအတွက် Apple ကပိုက်ဆံအိတ် application ကိုအသုံးပြုခြင်းချိတ်ဆက်မှုငွေပေးချေ၏ Apple ကပိုက်ဆံအိတ်ကိုမရရှိနိုင် function ကိုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ဦးလက်ကိုဝယ်ယူသည့်အခါ iPhone ကို Check
ပိုက်ဆံကယ်ဖို့, လူတွေမကြာခဏလက်နှင့်ဖုန်းများဝယ်ပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အများအပြားထောငျခြောစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းသူမကြာခဏဥပမာ, သစ်တစ်ခု ayfon သို့မဟုတ်ပုန်းအောင်းအမျိုးမျိုးသောအားနည်းချက်တွေကိုစက်ပစ္စည်းအတွက်အဟောင်းမော်ဒယ်ပေးခြင်း, ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များခိုး။ ဒါဟာပထမတစ်ချက်မှာတဖြည်းဖြည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောကြည့်လျှင်ပင်, ဂရုတစိုက်၎င်း၏ဝယ်ယူရန်အစမတ်ဖုန်းစစ်ဆေးထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်နာရီအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ: ကလနှောင်းပိုင်းဖြစ်နဲ့အတိအကျအချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့မကူညီပေးသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့နာရီမသတ်မှတ်သို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာဖေါ်ပြမထားဘူးဆိုရငျကော အဆိုပါ iPhone ကို Internet မှဒေတာများသုံးပြီး, အချိန်ဇုန်၏အလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု function ကိုရှိပါတယ်အချိန်ကိုပြောင်းခြင်း။ သို့သော်အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်စံ device ကို setting များကိုသွားသဖြင့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
IPhone ကိုမှ iPhone မှ application တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
IPhone ကိုအလုပ်ရှိသမျှကိုအကြီးအ features တွေနှင့်အတူကပဒေသာပင်များလည်းအရာလျှောက်လွှာ, မပါဘဲစိတ်ကူးရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကတယောက်ကိုတယောက် iPhone မှ applications များရွှေ့ဖို့စိန်ခေါ်မှုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ငါတို့သည်ဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုကြည့်ရှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ဝမ်းနည်းစရာတယောက်ကိုတယောက် iPhone မှ applications များ Porting Apple က developer များအခြားပန်းသီးတစက်မှအစီအစဉ်များကိုလွှဲပြောင်းရန်နည်းလမ်းများစွာမဟုတ်ပေး။
IPhone ကိုမှ subscriptions ကို Cancel
App Store မှာယခု download ပြုလုပ်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး၎င်း၏ဖောက်သည်ကမ်းလှမ်း: ဂီတ, ရုပ်ရှင်, စာအုပ်, apps များ။ တခါတရံမှာနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့် features တချို့ကိုမကြာခဏလူကိုကဝယ်ယူလျက်ရှိသည်ကြေးပေးသွင်းရသောတစ်ခုအပိုဆောင်းကြေး, များအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် user ကလျှောက်လွှာသုံးပြီးရပ်တန့်ထားပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပေးဆောင်ချင်ဘဲနေရသနည်းဆိုပါက, နောက်မှသူကစွန့်ခွာဖို့ဘယ်လို
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, iPhone ကိုအသုံးပြုသူအများစုအတွက်မှတ်ဉာဏ်ထဲကအများစုဟာ "ကိုစား" များသောအားဖြင့်ဖြစ်သောဓာတ်ပုံတွေအပါအဝင်, အများကြီးအပိုသတင်းအချက်အလက် zamusorivaetsya ။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်အပေါငျးတို့သစုဆောင်းပုံရိပ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပန်းသီး device ကိုမှတဆင့်နှင့် iTunes ကိုအစီအစဉ်ကိုသုံးပြီးကြောင်းကွန်ပျူတာသုံးပြီး: ငါတို့သည်သင့်ဖုန်းမှဓါတ်ပုံကိုဖျက်ပစ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုကြည့်ဒီမှာ iPhone ပေါ်မှာဓါတ်ပုံအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် Pre-installed စံဖုန်းမြည်သံ၏များစွာသောနေသော်လည်းအသုံးပြုသူများသည် ပို. ပို. ဖုန်းမြည်သံအဖြစ်သူ၏ Composite တင်ထားရန်ပိုနှစ်သက်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာအဝင်ခေါ်ဆိုမှုပေါ်တွင်သင်၏ဂီတထားရန်ဒါရိုးရှင်းသောမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ သငျသညျစံလက်စွပ်သေံလုပျနိုငျသညျ, သင်တန်းသင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာဖုန်းမြည်သံ Add, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုသင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းကစားရန်အခါ။
IPhone ကိုမှ iPhone မှဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းက iPhone သုံးစွဲသူများသည်ရံဖန်ရံခါအခြားပန်းသီးတစက်မှလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်မည်အကြောင်း, ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင် Format နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒီနေ့စာရွက်စာတမ်းများ, ဂီတ, ဓါတ်ပုံများနှင့်အခြားဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်နည်းလမ်းများမှာကြည့်ပါ။ iPhone မှ iPhone ကိုမှသတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းနောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုက iPhone ကနေဖိုင်တွေလွှဲပြောင်း, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးပြုလုပ် (ကူးယူအဖြစ်ဖိုင်အမျိုးအစားအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဒါတွင်တေးဂီတ, စာရွက်စာတမ်းများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို download လုပ်ပါအဘယ်သို့ format နဲ့
စမတ်ဖုန်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်အသုံးပြုသူများမဆိုအဆင်ပြေယခုအချိန်တွင်အတွက်စာပေကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် e-book သန်းပေါင်းများစွာမှအရည်အသွေးမြင့် display တွေ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားနှင့် access ကိုသာရေးသားသူတီထွင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးအဆင်ပြေနှစ်မြှုပ်ခြင်းမှကူညီသည်။ လွယ် iPhone ပေါ်မှာအကျင့်ကိုကျင့်ဖတ်နေ Start - ပဲသင့်လျော်တဲ့ဖိုင် format နဲ့က download လုပ်ပါ။
နှစ်ရက် - ပန်းသီးစမတ်ဖုန်းကတည်းကယနေ့တိုင်အောင်အသုံးပြုသူရေတွက်နိုင်သည့် capacious ဘက်ထရီအလုပ်ပုံမှန်အားဖြင့်အမြင့်ဆုံး, ကွဲပြားကြပါဘူး။ အိုင်ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့ငြင်းဆန်ပါဘူးတဲ့အခါမှာယနေ့တွင်ထက်ပိုမြင့်မားမနှစ်မြို့ဖွယ်ပြဿနာစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် iPhone ကိုကျနော်တို့ကဖုန်းကိုအားသွင်း၏မရှိခြင်းကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းအဓိကအကြောင်းရင်းများကိုကြည့်အောက်တွင်အားသွင်းမထားပါ။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်ပယ်ဖျက်ဗီဒီယိုများ recover လုပ်နည်း
IPhone မှဗီဒီယိုများမတော်တဆပယ်ဖျက်ရေး - အခြေအနေကအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, device ကိုမှပြန်ပြန်သွားဖို့မရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဖျက်ပစ်ဗီဒီယိုကို restore လုပ်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ iPhone ပေါ်မှာဗွီဒီယိုကို Restore ။ Method ကို 1: အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ကို Apple ကအကောင့်ထဲသို့အသုံးပြုသူများ၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအချို့ကိုသတိမဲ့ခြင်းဖြင့်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယူသောကြောင့်အထူးအယ်လ်ဘမ် "မကြာသေးခင်က Deleted" အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည် "မကြာသေးခင်က Deleted" ။
IPhone အတွက် Yandeks.Taksi
မကြာခဏအလျင်အမြန်မြို့ပတ်ပတ်လည်ရွှေ့ဖို့ကျနော်တို့တက္ကစီကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ကုမ္ပဏီခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်အမိန့်, ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. လူကြိုက်များမိုဘိုင်း application များဖြစ်လာခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုမှာသင်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကားမှာနေတဲ့မခေါ်ခရီးစဉ်၏ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်နှင့်အွန်လိုင်းထွက် watch နိုင်သည့်နှင့်အတူ Yandeks.Taksi ဖြစ်ပါသည်။